Wararka iyo Isbadalka |
In ka badan 400,000 mitir maalin kasta bakhaarka, oo ah ku dhawaad ​​70%, safka dadku buuq badan yahay mar labaad
waxaa maamula 20-08-03
Suuqa dharka ee sanadkan ayaa u oggolaanaya shaqaale badan oo dhar-xireen ah oo warshado leh inay la kulmaan markii ugu horreysay "lo'da lacageed" sanadihii hore waxay noqotay culeys culus. Intii lagu jiray qeybtii hore ee sanadka ku dhowaad dhammaan warshadaha dhar-qurxinta waxay ku sugnaayeen xaalad aad u hooseysa, kharash badan ...
Suuqa waa daciif, Hangzhou Shaoxing warshad midabaynta ayaa jaray khidmaddii dheehista
by admin 20-07-28
Waa bisha Luulyo waana waqtiga ugu kulul ee sanadka, iyo gudaha dhex dhexaadka iyo dhammeysiga aqoon-isweydaarsiga Ingiriisiga Printing iyo Dyeing Co., Ltd ee Keqiao Binhai New Area ee Shaoxing, heerkulku ma ahan mid aad u sareeya sida la filan karo. ” Xaaladda ayaa ka sii daran midda 1-3, ka ...
TY TexChem Booqashada Salaan ee Garry
Dhulkan ay dadku ku nool yihiin, waxaa jira ku dhawaad ​​Shiinaha oo adeegsada garoogo. Meesha ay ka jiraan dharka, dhar dhaqida, nadiifinta iyo rinjiyeynta, warshadeynta iyo dheehida warshadaha, waxaa muuqata in loo adeegsado auxiliaries ka TY TexChem. Kaaliyahayaashu waxay yiraahdaan laguma iibin karo Shiinaha oo keliya, laakiin sidoo kale dibedda, iyo meelaha u dhaw ...
Jawiga nololeed ee warshadda Yarn ee Hindiya ayaa kasii daraysa
Falanqeeyayaasha Hindida ayaa sheegay in inkasta oo qiimaha suufka ee Hindiya aad u hooseeyo haddana mastaradu ay ka faa'iideysanayaan wax soo saarka, daahyada iyo daahyada ay sababeen faafa waxay hoos u dhigi doontaa baahida macaamiisha lixda bilood ee soo socota. In kasta oo loo yaqaan 'covid-19' wuxuu saameyn ku yeelan doonaa qulqulka inta ugu badan ...
Runtii ma taqaanaa polyesterka ugu badan ee daabacaadda iyo soosaarka warshadaha?
Polyesterku waa nooc muhiim ah oo fiber isku-darka ah, waana magaca ganacsi ee fiber polyester-ka Shiinaha. Adigoo adeegsanaya PTA ama dimethyl terephthalate (DMT) iyo ethylene glycol (MEG) sidii ashyaa ceyriin ah oo loo maro isukeenis ama transesterification iyo polycondensation, polymer-ka sameynta fiber-poly ...
Ka dib marka dharka la qalajiyo ka dib marka la dhammeeyo, muxuu u beddeli doonaa iftiinka midabka? Maxaa laga sameeyaa?
Ka dib marka dharka la qalajiyo ka dib marka la dhammeeyo, muxuu u beddeli doonaa iftiinka midabka? Maxaa laga sameeyaa? 1.Cause Ka dib marka la qalajiyo oo la dhammeeyo ka dib, midabka iyo iftiinka dharka ayaa isu beddeli doona illaa xad. Tani waa ifafaale caan ah oo ah dheehidda. Marka loo eego falanqaynta, qodobbada soo socda ayaa u dhow ...
Sababta kala duwanaanshaha midabka denim
Kobaca dharka dharka denimka ah ee dalkeenu wuxuu ahaa tobannaan sano, in kasta oo biloowgu uu soo daahay, laakiin horumarku si dhakhso ah ayuu u socdaa. Iyada oo la horumarinaayo Times, dharka lo'da ayaa had iyo jeer horay u socota. Xilligan, Shiinaha̵ ...
Adeegsiga dhumuc weyn ee daabacaadda midabka iyo xaaladdeeda guud
waxaa maamula 19-12-23
Wakiilka jilicsanaanta, oo runtii ah nooc kaaliyeyaal diimeed, oo loo adeegsado daabacaadda dharka iyo warshadaha dheehista, kaliya kama dhigi karo daaha qallalan, wuxuu ka hortagi karaa ifafaalaha qulqulka dhismaha, wuxuuna siin karaa daboollo sifooyin farsamo oo heer sare ah iyo xasiloonida kaydinta. E ...
Wakiilka cusub ee ka hortagga 'phenol' ee jaallaha ah ayaa si la yaab leh qaali u ah
Bilowga sanadka cusub, marka loo eego baahida suuqa, Dongguan taiyang kiimikada dharka., Ltd. waxay soo saartey alaab cusub oo kaabayaal dhar ah, oo loo yaqaan anti-phenol yellow wakiil tyyr-88a. Waxaa la fahamsan yahay in sheygan uu yahay xarun gaar ah oo isku-ururin ah, oo ku habboon dharka polyamide ...
Falanqaynta mabda'a fulinta ee whitener
Waa maxay whitener Whitener waxay ka tirsantahay nooc maadooyinka dabiiciga ah, waxay hagaajin kartaa cadayashada dhogorta xaashida ah iyo xaashida, oo sidoo kale loo yaqaan whitener optic, whitener whitener. Mabda'a codsiga cadaanka ah Sababtoo ah dharka ayaa inta badan ka kooban nijaasta midabka iyo jaalaha, isticmaalka guud ee kiimikada ...
Falanqaynta astaamaha hygroscopic iyo perspirant iyo codsigeeda warshadaha
Hygroscopic iyo perspirant sidoo kale waa kaaliyaha hygroscopic iyo dhammeystirka perspirant. Waxay ka tirsan tahay nooc polymer hydrophilic aan -oneyn. Nuugista qoyaanka iyo dhididda dhididka ayaa runtii ah in dharka laga dhigo labadaba nuugista biyaha, biyo qabatinka, qallajinta dhakhsaha badan iyo waxyaabaha kale ee loo yaqaan ...
Astaamaha Astaamaha Anti -stain ee auxiliaries dharka iyo falanqaynta codsigeeda ee warshadaha
Wakiilka ka hortagga wasakhda, sida magacu u muuqdo, waa in laga hortago ifafaale ka hortag ah ifafaale ka ah wakiilka kaaliyaha ah. Marka loo eego agabyada kala duwan ee loo isticmaalo, wakiilka ka hortagga wasakhda waxaa loo qaybin karaa aashitada ka hortagga wasakhda, wakiilka firfircoon ee ka hortagga wasakhda. , iwm.1. Acid ka hortagga wasakhda caarada: ...